दुई दिन सार्वजनिक बिदा ? - ramechhapkhabar.com
दुई दिन सार्वजनिक बिदा ?
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले आज र भोलि दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गाउँपालिकाले धुरा मेलाको उपलक्ष्यमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय धुरा मेला लाग्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । स्थानीय बिदाबाट कट्टी हुने गरेर दुई दिन बिदा दिइएको बताइएको छ । यसअघि मंसिर पहिलो साता जात्राकै लागि जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाले एक दिन र मेलौली नगरपालिकाले दुई दिन बिदा दिएका थिए ।
सर्वोच्चमा ‘फुलकोर्ट’ बैठक बस्दै, बार अध्यक्ष र न्यायाधीशहरु छलफलमा
सर्वोच्च अदालतमा आज दिउँसो ‘फुलकोर्ट’ बैठक बस्दै छ । त्यसअघि बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै दुवै पक्ष आन्दोलनमा छन् । अहिले भइरहेको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य तथा न्यायाधीशहरु सहभागी रहेको बताइएको छ । आज दिउँसो २ बजेका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको ‘फुलकोर्ट’ बैठक तय गरिएको छ ।
करिब एक महिनादेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र बार नेतृत्वमा वकिलहरुले प्रन्या जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर जबरा पछि हट्ने संकेत नबनेपछि बारले आन्दोलन थप सशक्त र देशव्यापी पारेको छ । आज नागरिक समाज तथा विभिन्न पेशागत संगठनको समेत सहभागितामा सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म २ बजे नै मार्चपास गरिँदै छ ।